Yakakwira-simbi Warehouse Shuttle Kuchengetedza Sisitimu
Isu tinopa Radio shuttle mumhanyi 2021 yemhando yepamusoro ambient uye inotonhorera imba ine 1 makore mhando garandi. Isu tinozvipira kudura rekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
Radio shuttle mumhanyi 2021 yemhando yepamusoro ambient uye inotonhora imba ine chitupa cheSGS.BV neTUV
1.Product sumo redhiyo chomunhu anomhanya
Hegerls radio shuttle mumhanyi ndeye yakakwira density nzira yekuchengetedza. Inogona kuve yekutanga mune yekutanga kubuda kana yekutanga mune yekupedzisira kubuda. Hapana chikonzero chakanyanya kuwanda uye chaigona kuwedzera iyo yekuchengetera nzvimbo mashandisiro 50%.
Saizi Loading Kufamba nekukurumidza Simudza Bhatiri
3.1 Isu tine yedu patent yeredhiyo shuttle racking.
3.2 Radio shuttle racking ndeye yakakwira dura yekuchengetedza nzira. imba yekuchengetera yekushandisa inowedzera 40% kuenzanisa neyechinyakare inosarudza pallet racking.
3.3 Hegerls radio shuttle racking inogona kushandiswa mune yekuchengetera ambient uye inotonhora imba. Iyo tembiricha yekubvisa inogona kuve isingapfuuri 25 degree.
4.Production udzamu redhiyo shuttle anonetsa
4.1 Ruvara runogona kuvezwa. Isu tine ruvara rwevatema, girini uye yeyero kara.
4.2 Iyo saizi pallet inogona kunge iri W1200 * D1000, W1200 * D1200, W1100 * D1100, Iyo max kurodha kwepa pallet imwe neimwe inogona kuve 1500kgs.
4.3 mahombe mashanu mabasa Kuisa, kuburitsa, kuenderera kwekuisa, kuenderera kuburitsa, kuverenga, kufambisa pallet.
Midziyo ye4.4 ine yayo yega patent yekusimudza mashandiro, inoshanda zvakanyanya, yakawanda simba rekuchengetedza
4.5 ichishandisa iyo yeGerman yekumisikidza kumashure kudzvinyirira iyo photoelectric sensor, inogona kuziva iyo nhema uye chena ruvara zvinhu, yakasarudzika nzira yekuisa inogona kuziva epurasitiki tireyi ine maburi
4.6 Zvikamu zvekuzviona kushanda, kana chinhu chikakundikana kana kukuvara, chishandiso chinobva chaona uye alarm. system anti-kupindirana kugona, mune kumwe kukanganisa kwezvakatipoteredza kunogona kubudirira kubudirira marudzi ese emabasa
4.7 Huya uenzane neyakaverengeka yekuverenga basa, kuburikidza neyekure chaiyo-nguva kuratidza uye zvirinani zvigadzirwa zvigadzirwa, huwandu hwega yega chiteshi, uye inotsigira inoenderera hesheni
4.8 Absolute low tembiricha dhizaini
4.9 Midziyo mukati mechina kugadzira zvikamu zviri kushandisa nickel yakanamirwa pamifananidzo, kwete chete ngura uye ngura dziviriro, kunyanya kune chikafu indasitiri.
4.10 Iine hukuru hwakakura lithium iron phosphate bhatiri, isina chiyeuchidzo, hupenyu hwakareba uye chengetedzo yakanaka, huwandu hwekuchaja kusvika ka1000 nguva
4.11 Polyurethane mavhiri, pasi ruzha, pfeka kuramba
Pashure: HEGERLS radio shuttle inomhanyisa
Zvadaro: Warehouse Racking Shuttle Industrial Storage Racks System
Warehouse yekuchengetera Heavy Duty Simbi Nhovo Racki ...